POP: Moobilkaaga Moobilka ah ee loogu talagalay ku-sameynta warqadda | Martech Zone
Waxaan tijaabiyey tan qalab kala duwan oo nooc ah si aan u abuuro siligyo iyo qaabab iskuxiraha isticmaalaha… laakiin marwalba waxaan dib ugu celiyaa warqadda. Waxaa laga yaabaa haddii aan iibsaday a suufka sawirka, Waxaan lahaa xoogaa nasiib ah… Ma ihi nin jiir ah marka ay timaado sawir qaadista (weli). Gali POP, Codsi moobil ama kiniin ah oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu isku daro sawirrada noocyadaada warqadda ah iyo meelaha kulkulul ee is dhexgalka Waa qurux xariifnimo!
Ku billow inaad sawirto noocyadaada nooca ah
Sawirro ka qaad noocyadaada nooca ah
Abaabul oo Ku dar Iskuxiraha Isdhexgalka
Marar badan oo aan ku soo qaadaneyno warqad, weli caqabad ayeey ku tahay macmiilku inuu sawiro waxa aan soo saarnay. Tani waa codsi qurux badan oo loogu talagalay sameynta taasi! Ka soo degso iTunes or Google Play.
Shaacinta: Taasi waa isku xirnaan ku xiran suufka sawirka!
Tags: qaabkaapp mobilewarqadpopprototypinguikhibrada isticmaalahainterface interfaceux
Isweydaarsiga Bounce: Waa maxay ujeedka looga baxo?